China FK800 Automatic flat labeling machine with lifting device ụlọ ọrụ na ndị na-ebu ya | Fineco
③ FK800 igwe akụrụngwa akụrụngwa na ngwaọrụ na-ebuli elu nwere ọrụ ndị ọzọ iji mụbaa:
4. Ọrụ nchịkọta ihe na-akpaghị aka (jikọtara ya na echiche ngwaahịa);
5. Mee ka ịdebanye aha ngwaọrụ;
④ FK800 Igwe akụrụngwa na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na ngwaọrụ na-ebuli elu justgbanwe usoro dị mfe: 1. Gbanwee ịdị elu nke usoro ntinye aha, mee ka mma akara aka dị elu 2mm karịa ngwaahịa dị elu na otu ọkwa ahụ. 2. Gbanwee eriri ebu na aha njirimara na ihuenyo mmetụ ka ha wee kwekọọ. 3. Gbanwee ọnọdụ nke ihe mmetụta ahụ ka akara ngosi ọ bụla wee pụọ kpamkpam. 4. Gbanwee elu nke ahịhịa ahụ, hapụ ka obere aka metụ elu nke ngwaahịa ahụ.
⑤ FK800 igwe akụrụngwa akụrụngwa na-ebuli elu ala ihe dị ka 1.87 stere.
Igwe FK800 Automatic flat labeling machine na ngwaọrụ na-ebuli elu nwere oke akara ngosi na ezi mma, Ọ dabara na ihe achọrọ dị oke nkenke, ngwaahịa dị elu, ọ na-esikwa ike ịhụ njehie na anya gba ọtọ.
2. Ngwaahịa na-eweli ngwaọrụ, Ngwaahịa na-akpaghị aka na-ekewa, mgbe ahụ ebu ebu ga-akpali ngwaahịa na-atụ.
3. Mgbe ihe mmetụta ahụ chọtara na ngwaahịa ndị ahụ erutela ebe a chọrọ ya, igwe ga-ezipụ akara ahụ na ahịhịa na-etinye akara ahụ na ngwaahịa ahụ, usoro akara aha agwụla.
④ Ihe omuma ihe omuma: Ndenye aha nke kaadi, akara ntaneti, akara akpa, akara envelopu, akara igbe igbe, wdg.
4. Oghere dị n'ime nke isi bụ 76mm, na mpụta dị n'okpuru erughị 300mm, haziri n'usoro otu.
Ezu karama size (mm)
L: 40 ~ 400 W: 20 ~ 200 H: 0.2 ~ 150; Enwere ike ịhazi ya
≈2080 * 695 * 1390 (mm) Enwere ike ịhazi ya
≈2130 * 730 * 1450 (mm) Enwere ike ịhazi ya
NJ: Ø76mm; OD: ≤260mm
na-eri nri otu akpa / kaadi / ... na onye na-ebufe otu otu.
dezie ọdịnaya ibi akwụkwọ.
Chọpụta ihe mmetụta
zipu mgbaàmà na ngwa nbipute.
isi nke labeler, gụnyere labeelu-winding na-akwọ ụgbọala Ọdịdị.
arụ ọrụ na ịtọ ntọala.
duo sistemu sonveyor.
nakọta ngwaahịa ndị a kpọrọ aha.
tinye nhazi kọmputa.
kwụsị igwe ma ọ bụrụ na ọ na-agba ọsọ na-ezighi ezi.
6) Kwado ya na onye na-agbanwe voltage ka ọ gbanwee ka o kwekọọ na voltaji mpaghara.
Nke gara aga: FK Big ịwụ Labeling Machine
Osote: FK-SX Cache mbipute-3 nkụnye eji isi mee kaadị igwe
Ewepụghị kalama Double-kwadoro Labeler
Ewepụghị Bottle Side Labeler
Ewepụghị Box Labeling Machine
Ewepụghị Label Machine
Ewepụghị Labeling Machine
Ewepụghị Mkpa Label Applicator
Ewepụghị Mkpa Label Machine
Ewepụghị Mkpa labeling Machine
FK803 Automatic Rotary Now Bottle Labeling Ma ...